Ny ara-pitaovana no olana
Efa manana fanafody fitsaboana ireo aretina mitovy soritraretina amin’ny Coronavirus hatramin’ny taona 1991 i Madagasikara, raha ny fanazavana avy eo anivon’ny foibem-pirenena fikarohana sy fampiharana ireo voka-panafody eto Madagasikara na ny CNARP.
Hopitaly Hjra Ampefiloha Naato aloha ny famangiana marary
Betsaka ireo olona marary na mila fitsaboana maika lasa mijanona an-trano tsy fidiny amin’izao noho ny tahotry ny coronavirus.
Hopitalin’ny zaza tsaralalana Nankahery ireo mpiasan’ny fahasalamana ny minisitra
Hentitra amin’ny fampanajana ny fahadiovana toy ny fanasan-tanana amin’ny savony matetika, ny fahadiovan’ny rano ampiasaina sy ny sakafo hohanina ny eo anivon’ny hôpitalin’ny zaza etsy Tsaralalana.
Chloroquine Eny amin`ny hopitaly ihany no mahazo mampiasa azy
“Saropady ny aina ka tsy ho sasatra no hamerina fa zava-dehibe ny fanarahana toromarika indrindra ny fihibohana”,
« Au Coin du foie gras » Behenjy Tsy misy marary ireo mpiasa hatreto
Taorian’ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena mikasika ilay tera-tany vahiny iray mitondra ny tsimok’aretina “coronavirus” tonga teto amintsika ny 14
Mpampianatra mpikaroka Manamafy hery fiarovana ny ravina voarohy hazo
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ireo mpampianatra mpikaroka eo anivon’ny lalam-piofanana Simia eny amin’ny oniversiten’Antananarivo izay
Misy, hoy izy, ireo tratry ny “infractus dy myocarde”, izany hoe fahasimban’ny fo vokatry ny tsy fahampian’ny “oxygene” entin’ny ra, ilain’ny nofon’ny fo. Misy koa vokatry ny fahatsentsenan’ny lalandra mankany amin’ny fo ankoatra ilay marary ny tratra amin’ny ilany havia ka mitarika fahasemporana. Tsy tokony hisotro toaka na hifoka sigara noho izany ny olona mahatsapa fa efa marary fo, hoy izy raha te ho salama tsara. Tsy tokony hihinana sakafo matavy ihany koa sady ampy torimaso tsara ary mahay manatanja-batana. Ho an’ireo olona salama tsara nefa tratry ny fihetseham-po tampoka kosa dia ny fambolena toe-tsaina hanaiky izay zavatra mitranga no tena tsara indrindra, hoy izy. Na izany aza anefa, hoy dokotera Fidy ho an’ireo efa hita fa tsy mahazaka nefa mbola mijery zavatra mety hanaitra ihany dia aleo manatona dokotera maka fampitoniana.